ကြော်လိုက်ပါဦးမယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » ကြော်လိုက်ပါဦးမယ်…	21
- Ma Ei
Posted by Ma Ei on Jun 11, 2015 in Food, Drink & Recipes | 21 comments
ဒီတစ်ခါတော့ ကြက်သားကြော် နဲ့ ပုဇွန်ပွကြော် ကြော်မှာပါ….
ကြက်ကြော် အတွက် ကြက်ရင်ပုံတစ်ခြမ်း ကို အသားထွင် မထူမပါးလှီး ဆားနနွင်း အရသာမှုန့်နယ်ပြီးနှပ်ထားပါ…
အကြော်မှုန့်၊ ပေါင်မုန့်ခြောက်အမှုန့် တွေကိုတော့ အလွယ်တကူ ရယ်ဒီမိတ်အမှုန့်တွေဘဲ သုံးလိုက်ပါမယ်နော်…
မီးဖိုပေါ်မှာတော့ အကြော်အိုးကို ဆီများများထည့်လို့ ဆူအောင်တည်ထားပါနော်…
အဲ့ဒီနောက် နာရီဝက်လောက် နှပ်ထားတဲ့ ကြက်သားကို အကြော်မှုန့်နဲ့ နယ်လိုက်ပါမယ်…
ပြီးရင် တစ်ဖတ်ချင်းစီ ကြက်ဥခလောက်ရည်ထဲထည့်လိုက် ပေါင်မုန့်ခြောက်မှုန့်ကပ်လိုက်လုပ် ကာ
ရွှေညိုရောင် သန်းလာရင်တော့ ဆယ်ပြီးဆီစစ်ထားလိုက်ရင် မွှေးကြွပ်ရွနေတဲ့ ကြက်ကြော်ရပါပြီ…
ပုဇွန်ပွကြော် အတွက် ပုဇွန်ကို အမြီးချန်ခွာပါ.. အကြောပြတ်စေရန် ပုဇွန်ဗိုက်ကို ကန့်လန့်ဖြတ် သုံးချက်လောက်မွှန်းလိုက်ပါ…
ဒါမှ ကြော်တဲ့အခါ ကွေးမသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်..ပြီးရင် ဆားနနွင်း အရသာမှုန့်နဲ့နယ်ပါ…
မုန့်နှစ်ရည် အတွက် အကြော်မှုန့်ကို ရေနဲနဲနဲ့ပြစ်ပြစ်ဖျော်ပါ…ကြက်ဥတစ်လုံးထည့်ခလောက်ပါ…
မုန့်နှစ်ရည်ထဲ ပုဇွန်နှစ်လိုက် ပေါင်မုန့်ခြောက်မှုန့်ပန်းကန်ထဲထည့် မှုန့်ခြောက်မှုန့်ကပ်လိုက်လုပ် ကာ ဆီပူအိုးထဲထည့်ကြော်ပါ..
ရွှေညိုရောင် သန်းလာရင်တော့ ဆယ်ပြီးဆီစစ်ထားလိုက်ရင် မွှေးကြွပ်ရွနေတဲ့ ပုဇွန်ပွကြော်ရပါပြီ…
စားသောက်ဆိုင်တွေမှာတော့ ကြာဇံကြွပ်ကြော်အောက်ခံထားပြီး အလှဆင်ရောင်းကြပါတယ်…ဆိုင်မှာ ပုဇွန် ဆယ်ကောင်လောက်တစ်ပွဲကို အနည်းဆုံး ခြောက်ထောင်လောက် ရောင်းကြပါတယ်.. တစ်ကယ်ကုန်ကျစရိတ်တွက်လိုက်ရင် နှစ်ထောင်လောက်ဘဲကျတာမို့ ဆိုင်မှာ စားရင် နှမြောတသ ဖြစ်ရပါတယ်… ဒီကြားထဲ commercial tax 5% ကို စားသုံးသူက ပေးရသေးတာ… ဒီတော့ နဲနဲပင်ပန်းပေမယ့် တန်ပါတယ်… ကိုယ်တိုင်များများကြော်စားတော့မယ်…
အချဉ်ရယ်…မရိုးနိစ် ဆော့စ် ရယ်…
ပုဇွန်ပွကြော်ကို..ဆော့စ်လေးရယ်..မရိုးနိစ်ထဲ မုန်လာဥနီဖြူးထာတာလေးရယ်နဲ့ တို့စားပါနော်…တီအိ သမီးလေးကတော့ ပုဇွန်ပွကြော်ပိုကြိုက်ပါသတဲ့ သူ စားကောင်းတာမို့ ထပ်စားဖို့ ဆက်ပြီး ကြော်လိုက်ပါဦးမယ်…
About Ma Ei
Ma Ei has written 53 post in this Website..
View all posts by Ma Ei →	Blog
ခင်ဇော် says: ကြည့်ရင်း ကြော်နံ့ပါ မွှေးလာပြီ။
အကြော် အားဂျီး ကြိုက်လွန်းလို့ ဆီလျှော့နေရတယ်။
Ma Ei says: ဆွိရေ.. ဆီလျှော့စားတာကျန်းမာရေးနဲ့ ညီပါတယ်…
ပြည့်ဝဆီတွေဖြစ်တဲ့ စားအုန်းဆီ၊ ဝက်ဆီ၊ ဆီခဲများ၊ပြန်ကြော်ဆီတွေစားရင် အဆီအအိမ့် လွန်ကဲမှုများ ဖြစ်စေတဲ့ပြင်ကိုလက်စထရော လည်း တက်လာပါလိမ့်မယ် ဒါကြောင့်
ပဲဆီ စစ်စစ်ကိုသုံး…အကြော်အလှော်တွေလဲ ဆီစစ်ပြီးမှစားတယ်ဆိုပေမယ့် သက်ရောက်မှုတော့ ရှိမှာပါဘဲ… တစ်ခါတလေပါ ဆိုပြီး ဖြေစားနေရပါတယ်…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ခုတစ်လော ကြက်ဓာတ်ကျနေတာ.. ကြက်သားကာလသားချက်၊ ကြက်ကြော် မွအိ လို အကြော်မှုန့်လေးနဲ့ ကြော်စားကျိမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2282
Ma Ei says: ကြက်သားကို အကြော်မှုန့်နဲ့ နယ်ကြော်တာထက်
မုန့်နှစ်ရည်ထဲ နှစ် ပေါင်မုန့်ခြောက်မှုန့်ပန်းကန်ထဲထည့်
ပိုပြီး ရွရွလေးဖြစ်ပါတယ်… စားကောင်းတယ်…
Mike says: .သွားရည်ကျသွားတယ်မွအိေ၇
Ma Ei says: အားနာလိုက်တာ…
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: သများလည်း အကြော်ကြိုက်ဘာဒယ်..
သများအကြိုက်ဆုံး အကြော် ဂ
Ma Ei says: အဲ့ဒါတော့ ကြော်တတ်ဘူး…
ကျွှေးချင်ပါတယ် မျှစ်ရေ…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .စားချင်လိုက်တာ။
​ဒေါ် လေး says: ကြော် ကြည့်အုံးမှ
Ma Ei says: မလေးရေ…
မီးဖိုပြန်သုတ် အိုးခွက်ပန်းကန် ပြန်ဆေးရတာ မသက်သာဘူးပဲ…
ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်သေးတာဆိုတော့ ပန်းကန်လဲထည့်ပြင်ဆင် ပိုအလုပ်များ
ဒါပေမယ့် လုပ်ချင်တာလုပ်နေရတာမို့ ပင်ပန်းတယ်မထင်…
ကြည်ဆောင်း says: ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီလဲ အကြော်ကတော့ကြိုက်တယ်
မအိ သမီးကံကောင်းချက်းးးး
Ma Ei says: သမီးကတော့ အစားဆို စိတ်ချရပါတယ်…
ကြော်ာကြည့်ပါနော်…
သားတွေကြိုက်လို့ ခဏခဏကြော်နေရတော့မှာ..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2394
aye.kk says: မအိရေ
မြစပဲရိုး says: တို့ညီမ အကြော်တွေက စားချင်စရာ။
ဒီမှာတော့ အဲဒီလို အကြော်တွေ မစားတာကြာပြီ အိ ရဲ့။
အသား ဆို Oven ထဲ မှာ ထည့်တာများတယ်။
. ရွှေပြည်ပြန်တုန်းကတော့ မနက်တိုင်း အကြော်စုံ စားဖြစ်ခဲ့တာ။
ဆီအများကြီး သုံးဖို့ မလိုတဲ့ အကြော်အိုး ရှိနေပြီ။ Pressure Cooker လို ပုံမျိုး ကို ဆီ နဲနဲ ပါရုံ ဘဲထည့် ရတာ။
ကိုယ့်မှာတော့ မရှိပါဘူး။ ကြော်ငြာ တွေ့ဖူးတာ။
Ma Ma says: Air Fryer ဆိုပြီး ဆီမပါပဲ ကြွပ်အောင်ကြော်လို့ရတယ်ဆိုပြီး ကြော်ငြာနေတာ ၀ယ်ချင်စရာပဲ။
တကယ်အလုပ်ဖြစ်မဖြစ် မသိတာနဲ့၊ ၀ယ်ပြီးမသုံးဖြစ်ရင် အလဟဿ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားနေတာနဲ့ မ၀ယ်ဖြစ်သေးဘူး။
Ma Ei says: အဲ့ဒီအိုး ကြော်ငြာတွေ့ထဲက လိုချင်နေတာ …
နှမြော နေပေမယ့် လိုချင်နေလို့ ၀ယ်ပါဦးမယ်…
အောင် မိုးသူ says: အဲ့လိုမွမွကြော်တော့ အရမ်းကြိုက်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2
Shwe Sin Swe Zin says: စားချင်စ၇ာ ။ အိမ် မှာ လုပ် စား မယ်။
Ma Ei says: ရွှေစင် ဆွေဇင် ဆိုတာ အမအိ သိတဲ့သူများလား…သိချင်တယ်..
Crystalline says: ဂ​နေ့…မအိနည်းနဲ့​ကြော်​စားဖြစ်​တယ်​.. ပထမအိုးက​တော့..
ဆီအရမ်းပူချိန်​ ကြက်​သားထည့်​မိလို့.. မဟူရာကြက်​​ကြော်​ဖြစ်​..
အိုးပါလဲလိုက်​ရတယ်​.. ​နောက်​အသုတ်​​တွေကရှယ်​… ဆိုင်​မှာစားရင်​.. တစ်​နပ်​စာ..၇​ထောင်​​လောက်​ကျတာကို
ကွကိုယ်​​ကြော်​​တော့.. သုံး​ထောင်​ဖိုးနဲ့.. ကြက်​​ကြော်​ဆို.. တပတ်​​လောက်​လှည့်​မကြည့်​ချင်​
​လောက်​​အောင်​စားလိုက်​ရ… ​ကျေးဇူးပါအစ်​မ​ရေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.